Izao tontolo izao no saha iasana
"Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.» - Mat. 28:19.
Fony izahay tany Kalifornia tamin'ny taona 1874 dia nomena nofy iray mampieritreritra aho. (...)
Nanonofy aho fa betsaka tamin'ireo anadahy tany Kalifôrnia no tao amin'ny fivoriana ka nandinika ny tetikasa tsara indrindra ho an'ny fizaran-taona ho avy (...)
Zatovolahy iray fahitako matetika tamin'ny nofy no tonga tao amin'ilay fivoriana. Nihaino tamim-pahalianana ireo teny rehetra nolazaina tao izy ka niteny tamim-pahasahiana sy feno fandinihana nanao hoe: «lsan'ny tanim-boaloboky ny Tompo ny tanàna sy vohitra. Tokony handre ny hafatra fampitandremana izy ireo. Ny fahavalon'ny fahamarinana dia manao ezaka mafy amim-pamoizam-po hampivily lalana ny olona avy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny fitaka (...) Tokony hamafy eny amin'ny moron-drano rehetra ianareo».
«Mety tsy ho hitanao eo no ho eo ny vokatry ny asanao, saingy tsy tokony hahakivy anao izany. Raiso ho ohatra ho anao i Kristy. Betsaka ireo nihaino Azy saingy vitsy kosa ny mpianany». (...)
Notohizan'ilay mpitondra hafatra izany: «Manana hevitra voafetra loatra ho an'ny asa amin'izao vanim-potoana izao ianareo. Miezaka ny hanao drafitr'asa izay moramora tanterahina ianareo. Tokony hanana vina mivelatra kokoa ianareo. Tsy tokony hapetraka ao ambany vata famarana na ao ambany fandriana ny fahazavanareo fa eo amin'ny fitoeran-jiro mba hahafahany manazava izay rehetra ao an-trano. Izao tontolo izao no tranonareo». (...)
«Firenena maro no miandry ny fahazavana izay homen'ny Tompo azy ireo; ary voafetra ny finoanareo; tena kely tokoa izany. Tokony hitarina ny famolavolanareo ny asa (...) Mandrosoa. Hiasa amin-kery lehibe Andriamanitra raha hampilefitra ny eritreritrareo manoloana Azy ianareo. Tsy finoana ny firesahana ny zavatra izay tsy ho vita. Tsy misy zavatra tsy ho vita rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Ny fahazavana avy amin'ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra no hisedra izao tontolo izao» (...)
Fohy ny fotoana; ary ireo rehetra mino ity hafatra ity, dia tokony hahatsapa andraikitra lehibe izay manosika azy ireo ho mpiasa mahatoky, hampita hery miasa mangina tsara ka tsy ho sakana amin'ny alalan'ny fitenenana na amin'ny asa ho an'ireo izay mitady ny hampandroso ny asan'Andriamanitra. (...) Ny hazavana izay nomen'Andriamanitra antsika dia tsy hisy heviny ho an'izao tontolo izao raha tsy aseho ho hitany izany. - LS, 208-210.